တစ်ဦး Virtualization အလုပ်ရှာဖွေရေးများအတွက်တန်ဖိုးအရှိဆုံး Certificate | ယင်း
20 ဧပြီ 2017
တစ်ဦး Virtualization အလုပ်ရှာဖွေရေးများအတွက်တန်ဖိုးအရှိဆုံး Certificate
အကောင်းဆုံးကတော့, ချော်-ups ဖြစ်ပျက်ဘယ်တော့မှနိုင်ဘူး။ ချောက်ခြားစရာကောင်းလောက်အောင်သောအထူးသဖြင့်ကွန်ရက်၏ဘုံ၌, ပညာရှိမဟုတ်ပါဘူး။ သငျသညျအထွေထွေ mish-mash နှင့်အတူအတွက် virtualization စေသောအခါမည်သည့်အမှုကိစ္စတွင်, သင်တို့ကိုလုံခြုံရေးအလွှာပါဝင်သည်! virtualization တစ်ဦးကလက်ရှိမူဘောင်ချွတ်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တာရှည်တစီးကိုကျော်အလုပ်မစေခြင်းငှါတစ်အကုန်အကျသစ်ကို setup ကိုဝယ်ယူခြင်းမရှိဘဲတော်တော်များများဘာမှမစမ်းသပ်ဖို့မူဘောင်, ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ထို့ထက် ပို. အလုပ်လုပ်တစ်မူဘောင်ဒီဇိုင်းရန်သင့်အားခွင့်ပြုထားသည်။
အသစ်သောအရာကြိုးစားရန်စွမ်းရည်ရုံဒါ့အပြင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ်သင့်စာကျွမ်းကျင်မှုတိုးသင့်ရဲ့လက်ရှိမူဘောင်၏ဖြောင့်မတ် secure လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကျနော်တို့ virtualization ဘယ်လောက်ထူးခြားသောအကြောင်းကိုအတော်လေးအချိန်ကြာမြင့်စွာဆက်လက်နိုင်ကြောင်းသေးကျနော်တို့ VMware ကမှစွန့်ခွာလိမ့်မယ်။
တစ်ဦး Virtualizationn အလုပ်ရှာဖွေရေးများအတွက်လက်မှတ်ရ Get ဖို့အချိန်
အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်လည်းမဆိုအိုင်တီကြယ်ပွင့်မယ့်အလုပ်အကိုင်၏အခြေခံအပိုင်းအစဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကအထူးသဖြင့် virtualization ၏လက်ရှိတိုးတက်ရေးပါတီနှင့်အတူ, သင်အခွံမာသီးများနှင့်သော့ခလောက်နဲ့စတင်ပြီးအထူးပြုသို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရှေ့ဆက်ကူညီပေးသည်။ သငျသညျကိုဖွင့်နေရာတိုင်း, virtualization ကိုအလွန်ကောင်းစွာသိကြဆက်စပ်အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်အောင်, အအိုင်တီလယ်ကိုကျော်အသုံးပြုသွားမည်လျက်ရှိသည်။
Virtualization ၏အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်၏ကြီးမားသောငွေပမာဏသို့သော်ကြောင့်စိတ်အားတက်ကြွဖွယ်သတင်းဖြစ်နိုင်, ထွက်ရှိပါတယ်မရှိပါ။ သငျသညျအခြားနည်းလမ်း၏သေးငယ်တဲ့လယ်ကွင်းအခါအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်နှင့် ပတ်သက်. နက်နဲသောအရာကိုတစ်ဦးစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအတိုင်းအတာကွယ်ပျောက်တတ်သောအ။ သင့်ရဲ့လက်မှတ်ရွေးချယ်မှုနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုညွှန်ကြားသင်အမှန်တကယ်အသုံးချ (သို့မဟုတ်အသုံးချဖို့လိုအပ်) ကိုပစ္စည်းများကိုကြပါစို့။ ဤတွင် virtualization ၏ထိပ်တန်းဝဠာတှငျညှဉျးဆဲဖို့အကောင်းဆုံးစက်များတစ်ဦးသောအဘို့ကိုဖြစ်ကြသည်။
သိသာထင်ရှားတဲ့ virtualization အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်အတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းရှေ့ဆောင် VMware ကဖြစ်ပါတယ်။ VMware မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါင်းအဘော်တို့ကကမ်းလှမ်းခဲ့သည်အစိတ်အပိုင်းများအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်သို့သော် (အားသာချက်များကိုအလုံအလောက်) ကြှနျုပျတို့၏ထိပ်တန်းရွေးချယ်မှုအနည်းငယ်သူတို့ရဲ့အထင်ရှားဆုံးရွေးချယ်မှုများမှာရှိပါတယ်။
သငျသညျအထိ VCP-Level အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်ရန်သင့်လမ်းအလုပ်လုပ်ရန်ရှိသည်သောချွတ်အခွင့်အလမ်းတွင်, vSphere6ဖောင်ဒေးရှင်းနှင့်အတူစတင်။ ဤသည်တစ်ဦးထက်ပို VMware အဘို့အရက်စွဲလက်မှတ်မှတက်နှင့်အကယ်စင်စစ်ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်နှင့်အတူနှင့် VCP Cert အဘို့အသငျသညျလိုအပျခသင်ယူခြင်းမြန်ဆန်မှတက်ရဖို့မသက်ဆိုင်သင်၏အချိန်အပြစ်လွတ်သည်။
အဆိုပါ Container DATA Centre တည်ဆောက်မည် Virtualization (VCP6-DCV) လက်မှတ်သင်သည်ထိုလယ်၌အာရုံစူးစိုက်သင့်ကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များပေးခြင်းများအတွက်ကောင်းသောအဆင့်ရရှိသွားတဲ့။
ဒါ့အပြင်ကျနော်တို့မြင်ကွင်းတစ်ခုအသစ်သော VMware ကလိုက်လျောညီထွေ7အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်ပေါ်မှာငါတို့မျက်စိရှိသည်။ VMware သို့သော်ကျနော်တို့မကြာမီကြောင်းကိုမြင်လျှင်ထားချက်အရပါတယ်, အခုအချိန်မှာတစ်ဦး v7 မှာ Data Center ကို Virtualization Cert ပူဇော်မထားဘူး။
ယန္တရား Cisco သည် Networking virtualization ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်နှင့်သတင်းအချက်အလက်အားဖြင့်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အမြတ်ကြောင်းအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်တစ်ခုဌန်ပေးထားပါတယ်။
* ကြောင်း Cisco သည်၏မှတ်ချက်ယူ ကျေးဇူးပြု. ယခုဇူလိုင်လ 3, 2017 အပေါ်နုတ်ထွက်လိမ့်မယ်အချို့သောအရာ၎င်း၏ဒေတာအာရုံစိုက်စာမေးပွဲ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်အားပြင်ဆင်ရေးကဲ့သို့ဖြစ်၏။
အဆိုပါ Cisco Certified Network Associate (CCNA) မှာ Data Center ကို virtualization အမှန်တကယ် Cisco သည်များအတွက်စတင်သည်ရာအရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည် Cert သင်အထူးကုများနှင့် Professional က-Level အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်လည်းတက်သည်သတ်မှတ်, ဒါကြောင့် Cisco က virtualization အဘို့သင့်အစဇာတ်စင်အဖြစ်ကစဉ်းစားပါ။
အဆိုပါ Cisco ကညျ့ဝကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်သူလက်မှတ်အတွက် Cisco ကညျ့ဝကွန်ပျူတာစနစ်၏အခြေခံဖုံးလွှမ်းပြီး virtualized မှာ Data Center ကိုအခွအေနေ actualize ရန်သင့်စွမ်းရည်စမ်းသပ်။ ဤသည်မှာလက်မှတ်မကြာမီဒေါများအတွက်နည်းလမ်းမယ်။ ဒါဟာသင်ဤလက်မှတ်ရဖို့ရန်လိုအပ်သောဖြစ်ရပ်အတွက်ဇူလိုင်လ 4, 2017 ဒါ Hustle နုတ်ထွက်လိမ့်မည်! ဒါကြောင့်ရာထူးမှနုတ်ထွက်ပြီးရှေ့တော်၌ကိုယ်၌ဤတဦးတည်းကိုနှိပ်မရနိုငျသောချွတ်အခွင့်အလမ်းတွင် CCNP မှာ Data Center ကို Cert သတ်မှတ်အစားထိုးဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Cisco Certified ကွန်ယက်အဖွဲ့ Professional က (CCNP) မှာ Data Center ကိုလက်မှတ်လေးစာမေးပွဲများ၏ဖွဲ့စည်းကာ brute ဖြစ်ပါတယ်။ တိကျတဲ့ဒီဂရီမှ, သင့် Cert များအတွက်အများဆုံး apropos လမ်းကောက်ရန်သင့်အားခွင့်ပြုကြောင်းစာမေးပွဲတွင်ရွေးချယ်မှုရှိပါတယ်။
virtualization နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန် Microsoft ရဲ့လမ်းသငျသညျဆာဗာများကိုထိန်းချုပ်ရန်, ဒါမှမဟုတ်ပရိုဂရမ်းမင်းမူဘောင်သျောလညျးကွန်ရက်များကြီးကြပ်တက်အဆုံးသတ်စေခြင်းငှါအဘယ်အရပ်မူဘောင်အဖွဲ့အစည်းအပေါ်မူတည်ပါသည်။ သင်သည်သင်၏ sysadmin နှင့် virtualization အရည်အချင်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုနှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်လည်းရှိပါတယ်။
အဆိုပါ Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): အိုင်တီအေ့စ်နဲ့ Windows Server ကို virtualization နှင့်တကွသင်သိကြှမျးအသုံးပြုနိုင်မည့် Windows Server ကို 2012 (သို့မဟုတ် Windows Server ကို 2016) လက်မှတ်အထင်ရှားဆုံး Microsoft ကအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်အကြားတစ်ဦး standout ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည် Cert စမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းများအတွက်ကျော်ကြားမှုရှိသည်အားလုံးထားတဲ့သုံးခုစာမေးပွဲများ၏ဖွဲ့စည်းထားသည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဒီဆေးဝါးကိုဆင်းသွားပါကကူညီစေခြင်းငှါသကြားများဇွန်းအဆိုပါ MCSA တဲ့ Expert အဆင့်အောင်လက်မှတ်တစ်ခုမရှိမဖြစ်လိုအပ်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Azure နှင့် Windows Server ကို virtualization: မိုးတိမ်ပလက်ဖောင်းများနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံလက်မှတ်နှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခု key ကို Microsoft ကတီထွင်မှုအမှာစကားပြောကြား။ Microsoft ရဲ့အသစ်ကလက်မှတ်ဖွဲ့စည်းပုံအောက်၌, သင်ကသင်၏လက်မှတ်ပြောင်းလဲပစ်ရန်အခွင့်အလမ်းပေးခြင်း, ရွေးချယ်မှုများတဲ့ရေကူးကန်ကနေစာမေးပွဲကောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်။ သငျသညျတစ်ဦးတည်းသာစာမေးပွဲဖြေဆိုဖြတ်သန်းနေဖြင့် MCSE ရယူဖို့, သေးထို့နောက်သင်သည်သင်၏လက်မှတ်ပစ္စုပ္ပန်နှင့်တရားဝင်စောင့်ရှောက်ဖို့တသမတ်တည်းအခြားစာမေးပွဲတွင်ယူသင့်ပါတယ်။
Citrix ပစ္စည်းများကိုအဆိုပါအိုင်တီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သငျသညျသူတို့အားပစ္စည်းများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်တက်အဆုံးသတ်သောချွတ်အခွင့်အလမ်းအပေါ်, Citrix အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်ကိုသင်အံ့သြလောက်အောင်အရေးကြီးသောဖြစ်လိမ့်မည်။ Citrix အဆိုပါ virtualization မြင်ကွင်းတစ်ခုအပေါ်ရေရှည်ကစားသမားသည်နှင့်သင်သည်သင်၏ကျွမ်းကျင်သူဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ကိုအာရုံစိုက်ဖို့်၏သုံးအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်ကမ်းလှမ်း:
Citrix လက်မှတ်ရရေးအသင်း - Virtualization (CCA-V ကို)
Citrix လက်မှတ်ရ Professional က - Virtualization (ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျတော်-V ကို)
Citrix လက်မှတ်ရကျွမ်းကျင် - Virtualization (CCE-V ကို)
ဤအစက်များတစ်ခုချင်းစီတဖြည်းဖြည်းရှုပ်ထွေးသောအရည်အချင်းများနှင့်ကို item သတင်းအချက်အလက်တစ်ခုအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်တို့ကိုပြောင်းရွှေ့, Citrix ရဲ့ဦးဆောင် item ကို XenDesktop အပေါ် concentrates ။
Linux ကို sysadmins အတူတကွပူးပေါင်း! ဦးထုပ်နီ ကြီးမားသောရောင်းသူထံမှ unshackled ခဲ့ကြသူ sysadmins ဘို့အတော်လေးအမြတ်အစွန်းဖြစ်ကြောင်း virtualization အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်တစ်ခုဌန်ပေးထားပါတယ်။ ဦးထုပ်နီ အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်တစ်ခုကြီးမားဌန်ကမ်းလှမ်းပကတိလိုအပ်ချက်သင့်ရဲ့ virtualization အလုပ်အကိုင်လမ်းများအတွက်သင့်သည်အတိုင်း virtualization ထည့်သွင်းရာသိသိသာသာနံပါတ်, သို့သော်တဦးတည်း Cert ပေါ်ထွက်လာ။
အဆိုပါ Red Hat Certified Virtualization အုပ်ချုပ်ရေးမှူး (RHCVA) Cert သင့်ရဲ့ Linux ကို virtualization အလုပ်အကိုင် dispatches နှင့်သင့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုနှင့်အ virtualization ဖောင်ဒေးရှင်း, ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်နှင့် Red Hat Virtualization အသုံးချဖို့ဧည့်သည်များပေးပို့နှင့်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရန်စွမ်းရည်အတည်ပြု။ အဆိုပါ RHCVA ထိုနည်းတူသင်အင်ဂျင်နီယာနှင့်ဗိသုကာ-Level အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်ပြီးနောက်ရှာတက်သတ်မှတ်။
ဒါဟာအာမခံချက်တဲ့မျက်နှာသို့သှားရာလမျးသို့ဖြောင့်မြင့်တက်ဘယ်တော့မှရန်အရေးပါပါတယ်။ တစ်ဦးထိုင်ခုံကိုယူသုံးစွဲနိုင်မယ့်အဘယ်အရာကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နှင့်အကောင်းဆုံးကိုသင်၏လိုအပ်ချက်များကို fit တံ့သောအရာကိုထုတ်တွက်ဆ။ အနည်းငယ်အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်လည်းစိတ်ထဲအတွက်ခြေလှမ်းကိုတက်မှအဆုံးရည်မှန်းချက်ကိုစောင့်ရှောက်ရေတွင်းတစ်တွင်းအမိန့်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်လိုအပ်, စွမ်းရည်များပြောင်းလဲအဆင့်ဆင့်အတွက်လာ။ ဂိမ်းအစီအစဉ်ပြုလုပ်ခြင်းအစောပိုင်းသငျသညျအခြိနျနှငျ့တက်ကြွနှမြောနိုင်ပြီး, ကျနော်တို့ကိုတောင်မရောက်မှီမိုဃ်းတိမ်နှင့် virtualization အသုံးချဖို့တစ်ဦးအလုပ်အကိုင်ရတဲ့များအတွက်လျောက်ပတ်သောလက်မှတ်လမ်းကြောင်းမှထွက်ချပြီ။
သူတို့တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာဖြစ်ခြင်းအမှုအရာ, သင် virtualize သွားကြသည်ပြောချင်ပါသလဲ
ကိုယ့်တဦးတည်းအလုပ်လုပ်မူဘောင်ကို run နိုင်မတစ်ဦးကဆာဗာ: သင်တို့ဆီသို့ဘယ်အမှီသလဲ? သို့မဟုတ်, အခြားလက်ပေါ်နီးပါးမျှအပိုဆောင်းကုန်ကျစားရိတ်မှာအားလုံးအလှနျ Configure လုပ်လို့ရတဲ့ဖြစ်ကြောင်းအလုပ်လုပ်မူဘောင်တစ်ခုဌန်ပေါ်တွင်အပြေးစောင့်ရှောက်နိုင်သည့်မြောက်မြားစွာကို virtual စက်တွေစေသည်တစ်ခု Hypervisor run သော server တစ်ခု? ဒုတိယရွေးချယ်မှုဆိုအသင်းအဖွဲ့များအတွက်အများဆုံးကျွမ်းကျင်နှင့်လက်တွေ့ဖြစ်လိမ့်မည်။ မဆိုသူဌေးကသင့်ရဲ့မျိုးဆက်ပတ်ဝန်းကျင် virtualizing များ၏အလိုက်အထိုက်နေတတ်ခြင်းနှင့်ကုန်ကျစရိတ်လုံလောက်မှု exploit စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်မည်ဖြစ်သည်။
VMware, Cisco သည်, Microsoft, Citrix နှင့် Red Hat ကနေအောင်လက်မှတ်ဟာယယဇ်ပူဇော်သင့်ရဲ့မျိုးဆက်ပတ်ဝန်းကျင် virtualize ဖို့ဘယ်လိုသင်ပြပါလိမ့်မယ်။ နောက်ကျ, သူတို့ရဲ့ VMware Certified Professional က7လမ်းကြောင်းအပေါ်သစ်နှစ်မျိုးကိုအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်လည်းကျဆင်းသွား၏အဖြစ် VMware VMware Certified Professional က7- မိုဃ်းတိမ်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် Automation (VCP7-CMA) နှင့် VMware Certified Professional က7- Desktop နဲ့ Mobility ကို (VCP7-DTM) သင်သည်သူတို့၏လတ်ဆတ်ပစ္စည်းများ Ace ကိုကူညီ။
သို့သော်အောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်လည်းသင်နှင့်သင့်အလုပ်အကိုင်သငျသညျလုံးဝတဲ့ကွန်ရက်မာစတာသကဲ့သို့သင်တို့အကျိုးမပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့လမ်းကြောင်း delineate ကူညီပေးပါမည်အဘယ်အကျိုးကိုရကြလိမ့်မည်သည့်စည်းကမ်းအောင်ဒုက္ခနိုင်ပါတယ်ပြီးနောက်ရှာထားတဲ့လက်မှတ်ကောက်နေ။ တဦးတည်း technique ကိုသငျသညျအလုပျမှာအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းများနှင့်အတူစတငျဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နောက်သင်၏နောက်အပြင်းအထန်လုပ်ဆောင်ဆုံးဖြတ် virtualization တိုးတက်လာကျော်သင့်ကိုယ်ပိုင်အထူးစိတျဝငျစားနှင့်လုပ်ရပ်တွေဟာကြကုန်အံ့, သင်စတင်ရန်ဘယ်မှာသင်အခုပုံထွက်အသုံးချဖို့နေပစ္စည်းများကိုကြပါစို့။
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နှင့် ပို. ပို. သင့်ရဲ့အခြေအနေလှပစွာခံရဖို့ထွက်လှည့်မှတ်ပုံတင် virtualization နဲ့မိုဃ်းတိမ်ကဲ့သို့ virtualization သို့သင့်ရဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်ရုံသင်၏အဖွဲ့အစည်းရန်သင့်အားအရေးကြီးသောစေမည်မဟုတ်ဒါ့အပြင်ပွင့်လင်းဗိမာန်စိတ်ကူးအလုပ်အကိုင်အဘို့အကြောင်းကိုမဆိုအမှတ်အတွေးမှာဘယ်တော့မှသင်က pathways ။
virtualization အဘယ်ကြောင့်တစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းမဖြစ်, အတူသို့မဟုတ်သင်မပါဘဲကြီးထွားလာအပေါ်စောင့်ရှောက်ကြမည်နည်း